Nagarik News - ट्यालेन्ट नाप्ने 'प्लेटफर्म'
ट्यालेन्ट नाप्ने 'प्लेटफर्म'
15 Mar 2014 | 09:10am
१ चैत्र, २०७०
यस वर्षको 'मिस नेपाल' को बन्ला? प्रत्येक वर्ष धेरैको खुल्दुलीको विषय बन्छ। यसपालि मिस नेपालको आवेदन दिने समय सकिन लागेको छ। कसको भाग्यमा ताज पहिरिनेछ, त्यो थाहा पाउन अझ केही दिन कुर्नुपर्छ।
मिस नेपाल बन्नेको करिअर बदलिन्छ। नेपाल मात्र नभएर विश्वमा नाम राख्ने मौका मिल्छ। सहभागीले तालिमबाट थुप्रै अनुभव बटुल्छन्। विश्व सुन्दरी प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाउँछन्। यो अवसर यत्तिकै आएको भने होइन।
जतिबेला छोरीहरू घरमै सीमित हुन्थे। पढेलेखेकाहरु पनि घरबाहिर 'एक्सपोजर' खोज्न कमै निस्कन्थे। २०४४ सालमा गोपाल सुन्दरलाल कक्षपति काठमाडौं जेसिसका अध्यक्ष थिए। त्यसैबखत उनलाई नयाँ काम गर्न मन लाग्यो। सक्षम छोरीहरूलाई देशले चिन्ने माध्यमको खोजी उनले त्यतिबेलै सोचेका हुन्। युवतीहरू बीच लुकेको प्रतिभा बाहिर ल्याउने उपाय दिमागमा फुर्योन, 'नेतृत्व प्रशिक्षण'। फुक्लो प्रशिक्षणमा त कोही आउँदैनथे। दिमागी सर्भे गर्दा युवतीहरू ग्लामरतिर आकर्षित भएको भेटाए। सुन्दरताको बाटोभित्र पसेपछि 'मिस नेपाल' नाम जुराए। तर, त्यो सोचले पाँच वर्षपछि मात्र पूर्णता पायो।
नेतृत्व विकास भन्ने बित्तिकै महिलाहरु राजनीतिज्ञको काम ठान्थे। शुरुको वर्षमा कक्षपतिलाई सहभागी जुटाउन निकै गाह्रो पर्योस। नेतृत्वका कुरा गर्दा 'हाम्लाई के काम? राजनीतिज्ञ त होइनौ' जस्ता जवाफ पाउँथे। हरेक क्षेत्रमा पिछडिएका महिलाको यो प्रश्न उनलाई समय सापेक्ष लाग्थ्यो।
जति बेला 'मिस नेपाल'को अवधारणा ल्याए। त्यसलाई उनी एउटा 'रिभोलुसन' भन्न रुचाउँछन्। कक्षपति भन्छन्, 'विकासको पक्षमा पश्चिमी समाजको धेरै कुरा सिक्दैछौं।'
शुरुका वर्ष निकै गाह्रो भयो, भाञ्जी, बहिनी, नाता समेत खोजेर सहभागी बन्न आग्रह गर्नु पर्योन। जेनतेन ४५ जना आवेदक बनाए। तीमध्ये २० जना छनौटमा परे।
पहिलो इभेन्ट भएकाले चुनौति, अवसर दुवै थिए। शुरुमै विरोधका आवाज सुनिन थालिसकेको थियो। सीमित श्रोत, साधनका बीच निकै गाह्रो भएको उनी सम्झन्छन्। 'लाइट, साउण्डमा क्वालिटी थिएन, कोरियोग्राफर, ड्रेस डिजाइनर, प्रशिक्षक, स्पोन्सर सबै खोज्नु चानचुन थिएन। जे थियो हामी पहिलो कार्यक्रमबाट निराश बनेनौं।'
'इभेन्टका लागि एकहप्ता समय थियो। स्पोन्सर भेटिएको थिएन। साथीहरु मिलेर पैसा उठाएर भएपनि 'मिस नेपाल' गर्ने योजना बनायौं। लास्ट आवरमा स्पोन्सर भेटायौं।'
पहिलो 'सो' कसरी गर्ने कुनै आइडिया थिएन। कक्षपति सन् १९९३ मा मुम्बईमा 'सो' हेर्न पुगेका थिए। धेरै वर्षदेखि हुँदै आएको इभेन्ट त्यसमाथि दक्ष प्रविधिले भारतको 'सो' निकै राम्रो थियो। फेमिना म्याग्जिनकी बिमला पट्टेलले नेपालमा हुने 'इभेन्ट'लाई प्राविधिक सहयोग गर्ने वचन दिएकी थिइन। नेपाल फर्केपछि आफै गर्ने आँट जुटाए। 'शुरुमा केही साथीहरुले पत्याएका थिएनन्। अन्य देशमा भएका ब्युटि कन्टेस्ट बारे अनुसन्धान गरें। मैले आँटे। जसरी तसरी कार्यक्रम सफल भयो। कसैलाई प्राविधिक सहयोगको हात विदेशतिर फैलाउनु परेन।'
शुरुका चार वर्ष काठमाडौं जेसीजले मिस नेपालको आयोजना गर्योन। हरेक वर्ष नेतृत्व परिवर्तन हुने संस्थाले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छ जस्तो उनलाई लागेन। अनि जन्म्यो 'हिडन टे्रजर प्रालि'। जुन प्लेटफमले 'मिस नेपाल'लाई निरन्तरता दिइरहेको छ। जसको अध्यक्ष उनी आफै हुन।
जति वर्ष वित्दै गए, उति चुनौति थपिँदै छन्। आम नेपालीको अपेक्षा पुरा गर्न चुनौति देख्छन्। भन्छन्, 'हिजो देखेको कुरा मान्छेले भोलि हेर्दैन। नयाँपन खोज्छ। कसरी नयाँ कुरा थप्ने चुनौति मान्नुपर्छ।' चुनौति सफलताको बाटो ठान्छन् उनी। थप्छन्, 'च्यालेन्जेज इज नेभर स्टप।'
मिस नेपालको बीस वर्षे दौरानमा बीचमा विरोधका स्वर धेरै सुनिए। जसले २ वर्ष इभेन्ट रोकिएको थियो। २०५८ सालमा राजा वीरेन्द्रको वंशनास भएको वर्ष उनी आफैले रोके। २०६२ सालको राजनीतिक आन्दोलन, २०६४ सालमा विरोधका कारण रोक्नु परेको थियो।
२०६४ सालमा माओवादी नेतृ अमृता थापाको नेतृत्वमा ३२ वटा संस्थाले हिडन टे्रेजरसँग 'टेबल टक' गरे। मिस नेपालको विरोध गर्ने ३६ बुँदे असक्षम ट्याग लिएर पुगेका थिए। जसलाई कक्षपति लगायतले हरेक बुँदाको जवाफ दिएर चित्त बुझाए। आखिरमा इभेन्ट युवतीहरुका लागि लाभदायक भन्नेमा उनीहरु पनि विश्वस्त बने।
मिस नेपाललाई पछ्याउँदै नेपालमा धेरै ब्युटी कन्टेस्ट हुने गरेकोमा उनी सन्तुष्ट छन्। 'आजभोलि जातीय, व्यावसायिक रुपमा प्रतियोगिता हुने गरेका छन्। सहभागीहरु मिस नेपालमा आउने लक्ष्य बोकेका हुन्छन्। एउटै कन्टेस्ट पर्खेर बस्नु परेन्।'
मिस नेपाल तयारीका लागि हुने ट्रेनिङ सहभागीका लागि निकै फलदायक ठान्छन् उनी। अहिलेसम्मका मिस नेपाल आफ्नो खुट्टामा उभिनु पर्छ भन्ने सिकेका छन्।
कक्षपति मिस नेपालका अर्को फाइदा बताउँछन्, 'धेरैले नेपाली, विदेशीले उनीहरुलाई चिन्छन्। धेरै विषयमा कन्पि्कडेन्ट छन्। आफ्नै व्यावसायिकतामा बाँचेका छन्। ठूलो उपलब्धिको पाटो हो।'
जति विकास हुँदै जान्छ उत्तिकै चुनौति थपिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्लेट फर्ममा पुगिसकेको नेपाललाई कसरी उपलब्धि हात पार्ने भन्ने चिन्ता हुनु स्वभाविक हो। कक्षपति मिस नेपालमा अझै नयाँ विषय समावेश गरेर अन्य देशलाई उछिन्ने सपना बोकेका छन्।
नाम, काम, दाम पाएकी छु : रुवी राणा
प्रथम मिस नेपाल रुवि राणाले धेरैलाई सुन्दरता दिइसकिन्। उनले कुपण्डोलमा 'रुबिज ब्युटी होम' चलाएको १८ वर्ष भइसकेछ।
उनी इतिहासमा नाम लेखाएकोमा सन्तुष्ट छिन्। आफूमात्र होइन, छोरीलाई पनि मिस नेपाल बनाउने सपना बोकेकी छिन्।
देहरादुन जन्मेकी उनी वीरगञ्जमा हुर्किन्। सन् १९९२ मा राज कर्णिकार हाउसको 'गार्मेन्ट फेसन सो' का लागि काठमाडौं आएकी थिइन्। लगत्तै गोरखापत्रमा मिस नेपालको लागि विज्ञापन देखेपछि आफूलाई जागिर खुलेजस्तै खुसी हुँदै भाग लिएकी थिइन।
'मिस नेपालमा सहभागी भएँ। तालिमका लागि जुत्ता, लुगामा धेरै खर्च भएको थियो। मेहनत गरेकी थिएँ। नेपालमा पहिलो भएकाले इतिहास बनाउने चाहना थियो। पूरा गरें।'
पहिलो मिस नेपाल अहिले धेरै प्रगति भइसकेको छ। प्रविधि, तालिमका विषय परिवर्तन भए। पहिलो 'प्रतिस्पर्धा नौलो, अनौठो लाग्थ्यो।'
ब्युटी प्याजेन्टलाई अपनाएकी उनलाई 'मिस नेपाल' बन्दा त्यति नौलो लागेन। सामाजिक जिम्मेवारी थपिएजस्तो लागेको थियो। आफू सार्वजनिक सम्पत्ति भएको महसुस भएको बताउँछिन्। मिस नेपालको पूर्व तालिमपछि उनी खानपिन, उठबस, मासमा कसरी बोल्ने, बानीव्यहोरा कस्तो हुने जस्ता कुरा सिकेकी थिइन। उपाधि गहँु्रगो ताज सम्भि्कन्छन्। जुन ताजमा धेरैको मेहनत, लगन, आफ्नो आत्मविश्वास मिसिएको बताउँछिन्।
उनी सानैदेखि नक्कली थिइन। आमाको साडी काटेर लैंहगा, चोली बनाएर लगाएको अझै सम्झन्छिन्। 'फिल्म स्टार' म्यागजिन, नयाँ मुभी आउँदा साथ हेर्थिन्। फिल्ममा हिरोइनको डे्रस नक्कल गरिहाल्थिन्। उनलाई बुबाले सर्पोट गरेकाले सजिलो थियो।
'अहिलेसम्म कमाएको नाम, काम, दाम पाएकी छु। अस्तित्वमा रहन सकेकी छु। सबैको इज्ज्यतसाथ सम्मान पाएकी छु। इतिहासमा नाम छ।' यी सब उपाधी मिस नेपाललाई जस दिन्छिन्।
'फस्ट इज फस्ट, अहिलेसम्मका मिस नेपालले सम्मान गर्छन।' त्यहीबेला फिलिपिन्स पुग्दा 'मेकअप कोर्स' गरेकी उनलाई ब्युटी पार्लर खोल्न सघाएको बताउँछिन्।
अब नेपालमै केही गर्छु : पुनम घिमिरे
१२ वर्ष अघि अमेरिमा पुगेकी पूर्व मिस नेपाल पुनम घिमिरे यतिबेला नेपाल फर्केकी छिन्। अभिभावकत्व, संस्कृतिसँग टाढा हुन सकिनन्। त्यसैले अब नेपालमै बस्ने बताइन्।
'आउने जाने गरिरहन्थें। अब भने फर्किन्न। अभिभावकहरुसँगै बस्ने सोच बनाएँ। अब नेपालमै रहन्छु' उनले भनिन्, 'सबै युवा बाहिर जाने चलन बढ्यो। देशमा बृद्धबृद्धा मात्र हुन्छन्।' थप्छिन, 'मेरा बच्चालाई पनि आफ्नो देशको संस्कृति सिकाउनु छ।' उतै जन्मेका २ छोरा लिएर आएकी छिन्।
शंकरदेव क्याम्पस मास्टर्स पढ्दै गरेकी घिमिरे सन् १९९६ मा मिस नेपालको ताज पहिरिएपछि एकाएक चर्चित बनिन्। सामाजिक जिम्मेवारी बढेको आभाष गरेकी थिइन्।
ललितपुर बखुण्डोलमा जन्मेकी घिमिरे, मिस नेपाल हुनु अघि एक सामान्य विद्यार्थी थिइन्। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक थिइन। त्यतिबेला एकप्रकारको हुइम आयो। जुन हुइमले उनलाई एकाएक चर्चाको उचाइमा पुर्या्इदियो।
विभिन्न देशमा पुग्दा नेटवर्किङको श्रेय मिस नेपाललाई दिन भुल्दिनन्। 'जहाँ बसेपनि नेपाली कला, संस्कृति, चाडपर्व, गौरव कहिल्यै बिर्सेकी छैन। विदेशमा बस्दा नेपाली नागरिक भएको अझै बढी जिम्मेवारी वोध हुँदो रैछ।'
अहिलेसम्म गर्न सकेको सामाजिक काम, नेटवर्क सबै मिस नेपालको देन मान्छिन्। नेपालमा बनेका वस्तु अन्य देशमा पुर्या्उने काममा सघाएको दाबी गर्छिन्।
पढाइको सिलसिलामा विदेशिएकी उनी फ्लोरिडा बसिन्। त्यहाँ बस्दा फ्लोरोडा एसोसिएसन अफ नेप्लिज सोसाइटीमा भाइस प्रेसिडेन्टको रुपमा काम गरिन्। भन्छिन्, '६ वर्ष भोलुन्ट्यरी भएर काम गरें। एनआरएनमा इन्टरनेशनल कोर्डिनेटसन भएर काम गरेँ। नेपाली प्रोडक्ट प्रमोसन गर्न सघाएँ। नेपाल बाहिर भएपनि सामाजिक काममा सहभागी थिएँ।'
« नेमिता आङबुहाङ मिस पुर्वाञ्चल लंगिन लिटिल स्टार »
विश्व कविता महोत्सव चैत ७ देखि
काठमाडौं– भारतको साहित्य एकेडेमी र संस्कृति मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा चैत ७ गतेदेखि १० गतेसम्म नयाँ दिल्लीमा विश्व कविता महोत्सव हुने भएको छ।
रक्तिम साँझमा जोशिए दर्शक
काठमाडौं– कार्यक्रमको अन्त्यतिर जीवन शर्मा एक्कासी मञ्चमा देखिए। उनले गाउन थाले, 'चाहिँदैन मलाई सिसाको महल, यसै राम्रो छ मेरो जीवन, चाहिँदैन मलाई सम्पत्तिको रास।'
होली खेल्दै फिल्मको प्रचार
काठमाडौं-सधैंझैं यो वर्षको होलीमा पनि अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरको गोदावरीस्थित निवास कलाकार जमघटको केन्द्र बन्यो। राजधानीमा भएका सबैजसो कलाकार करिश्मा निवासमा होली खेल्न भेला भएका थिए।
यस वर्षको 'मिस नेपाल' को बन्ला? प्रत्येक वर्ष धेरैको खुल्दुलीको विषय बन्छ। यसपालि मिस नेपालको आवेदन दिने समय सकिन लागेको छ। कसको भाग्यमा ताज पहिरिनेछ, त्यो थाहा पाउन अझ केही...
'रेखाको हस्तक्षेपले फिल्म छाडेँ'
काठमाडौं– फिल्म 'हिम्मतवाली'को सेटबाट निर्देशक श्याम भट्टराई बाहिरिएपछि निर्माता तथा अभिनेत्री रेखा थापा आफैंले निर्देशकको कुर्सी सम्हालेकी छन्।
'मिस नेपालले धेरै सिकायो'
काठमाडौं– हालै रिजिल भएको 'ऋतु' फिल्मबाट डेब्यु गरेकी अभिनेत्री मलिना जोशीले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेकी छिन्। पूर्व मिस नेपाल जोशीले यसको जग 'हिडन ट्रेजर'ले बसाएको बताइन्।
रेखाद्वारा निर्देशक विस्थापित
काठमाडौं– अभिनेत्री रेखा थापाको निर्माण र अभिनय रहेको फिल्म 'हिम्मतवाली'बाट निर्देशक श्याम भट्टराई विस्थापित भएका छन्। भट्टराई बाहिरिएपछि रेखाले र्नै निर्देशनको काम सम्हालेकी छिन्।
रामकृष्णको तेस्रो एकल साँझ हुने
काठमाडौं-गायक रामकृष्ण ढकाल तेस्रोपटक एकल साँझमा प्रस्तुत हुने भएका छन्। 'ढकाल समुधुर साँझ' नाममा यसअघि दुईपटक एकल कार्यक्रम गरिसकेका ढकाल आउँदो नेपाली नयाँ वर्षको सन्ध्यामा प्रस्तुत हुन लागेका हुन्।
काठमाडौं - विकास आचार्य निर्देशित नाइ नभन्नु ल २ ले बुधबारसम्म डेढ करोड रुपियाँको कारोबार गरेको...
काठमाडौं– नीर शाहको निर्देशनमा बनिरहेको फिल्म 'सेतो बाघ'को सुटिङ ५१ दिनमा सकिएको छ। काठमाडौंको सिनामंगलस्थित एक...
काठमाडौं - 'तिनीहरु राँकेभूत होइनन्।' विप्लव ढकालले चालिसको दशकमा लेखेको यो कविताले उनकै जिल्ला भोजपुरका कवि...
'एकल साँझ'मा फर्के ढकाल
काठमाडौं- भलाद्मी दर्शक, भव्य अर्केस्ट्रा र अनुभवी आवाज। आफ्नो जीवनकालमा कमै गायकले पाउने यस्तो सुविधाबीच गायक...